Ahịa Ahịa na Digital Age | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 29, 2020 Wenezdee, Jenụwarị 29, 2020 Aaron Burcell
Inweta nzaghachi ndị ahịa dị mkpa-na inweta ya ọsọ ọsọ-dị mkpa karịa mgbe ọ bụla maka azụmaahịa azụmaahịa. O doro anya na ịme ndị mmadụ n'ọrụ siri ike, ndị nyocha a na-enyocha ajụjụ abughi nkwa, yana usoro iheomume iji nweta nghọta ndị ahịa. -eche kwa ogologo iji mee ihe dị iche maka azụmaahịa ahụ. Ma, enwere ụzọ ka mma iji nweta nghọta ndị ahịa chọrọ nke na-akwado ngwaahịa gị na azụmaahịa gị.
Nchikota nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ abikọla ọnụ iji mepụta nghọta ndị ahịa ka mma, ngwa ngwa, dị ọnụ ala. Ndị ahịa kachasị mma ọhụụ nwere ike ime ka smartphone dị elu. A na-akpọ ụdị ọhụrụ nke ngwaahịa a Research-as-a-Service (RaaS) ngwọta, ngwaahịa RaaS kachasị mma na-elekwasị anya na iwepu nkụda mmụọ logistist dị na usoro ọdịnala nke imepụta akara nyocha. Ihe ngwọta RaaS na-enye ndị na-eme nchọpụta ike, ndị ọchụnta ego, ndị njikwa ngwaahịa, ndị na-emepụta ihe na ndị na-ere ahịa ka ha lekwasị anya na ihe kachasị mkpa; na-ege ntị na ndị ahịa na atụmanya, na ijikọta nghọta mmadụ na UX na ụzọ ụzọ ngwaahịa.
Ebe agbajiri Qualitative Research
Dị ka Marc Andreesen si kwuo, "sọftụwia na-eri ụwa." Na, enweghi ihe atụ kariri usoro, ngwa ọrụ na usoro iheomume maka iwulite ngwaahịa. Oge Lean-Agile mepụtara mgbawa nke mmepe ngwaahịa na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ niile, yana ngwaọrụ maka nzuzo, ịhazi, nyocha, nyocha na mbupu ngwaahịa - pipeline nke mmepụta gbanwere kpamkpam, ma e wezụga ịmepụta nghọta mmadụ. Nnukwu data na ọgụgụ isi gosipụtara na ha kwere nkwa iji mee ka nyocha nke oge ochie gharazie ịba uru, mana nkwa ndị ahụ emezughị ma mkpa maka nghọta mmadụ ka dị oke, yana usoro iheomume na ngwa ọrụ agafeghị oke na mmepe ngwaahịa ọgbara ọhụrụ. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, e mere nchọpụta nyocha site n'otu ụzọ ahụ ọ dị afọ iri abụọ gara aga, ọ bụ ya mere nke ahụ anaghị aba uru ọzọ:
Usoro omenala nke ime nnyocha ndị ahịa dị oke ọnụ
Ngwaọrụ na-eme ka ị nweta nyocha nyocha oge na-adịghị oke
Chọta nghọta ndị ahịa na ọkwa dị iche iche nke R&D na-agbagha ọsọ, ọsọ gaa ahịa
Ndị ụlọ ọrụ chọrọ ịnweta ndị ahịa ha, rutere nso anaghị agụ
Volzụta Nnyocha Ogologo
N'iji teknụzụ na-egbusi iji merie nsogbu ịma aka na akụkọ ihe mere eme na nchọpụta qualitative, ngwọta RaaS na-enye ndị na-eme nchọpụta ike ịtụgharị uche n'ihe kachasị mkpa: ịme nyocha ha na iwepụta nghọta nke nwere ike ime ezigbo mgbanwe.
Ozi ọma ahụ bụ na ịnakwere teknụzụ nyocha ọhụụ ọhụrụ abụghị mkpebi ọhụrụ, nke na-ewu ewu. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ewere teknụzụ ọhụụ iji nyere aka ịmepụta na ịgbanye nyocha nyocha na ngwaahịa na ịzụ ahịa ahịa, ngwa ngwa na ugboro ugboro. Na, nke a bụ nnukwu ihe nzuzo: Ndị ahịa na ndị isi azụmaahịa na ụlọ ọrụ profaịlụ dị elu gburugburu ụwa, sitere na Samsung, LG, Verizon, Mpaghara Ngwa igwe na Hyundai - nọ n'afọ nke abụọ zuru ezu nke iji ngwa RaaS iji gbanwee azụmaahịa ha, zute ma gafere atụmanya ndị ahịa. Ihe ngwọta RaaS bụ akụkụ nke njikwa ngwaahịa na omume kacha mma R & D, igbe ọzọ na eserese Growth Stack nke na-egosipụta ngwa ọrụ na usoro dị mkpa maka ịme ngwaahịa dị ukwuu.
methinks na-anapụta Research-dị ka-a-Service
Companylọ ọrụ dabeere na Silicon Valley echiche bụ qualitative research ngwọta nke ọdịnihu. Gba ụgwọ ụzọ izizi nke izizi na sistemu na-eme ihe ike nke na - ejikọ gị na ndị ahịa na ndị ọkachamara enyocha, ị nwere ike nweta nghọta ozugbo maka mkpụrụ - ụzọ n'ụzọ asaa, ka ọ dị - ọnụ ahịa ya.
methinks na-eme nnukwute mmetụta na ụlọ ọrụ R&D nke ọtụtụ ijeri dollar site na ime nkwado ndị ahịa oge nhazi, ịrụ ọrụ nke ọma ma na-efu ọnụ na-eweta ihe ọ bụla ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla n'ahịa. Efu, oge na lọjistik aba abughi ihe mgbochi n'inweta echiche ndi ahia. N'ihi ya, ugboro ole ị na-eduzi ma na-etinye nyocha nyocha kwesịrị ịbawanye ma gbanwee usoro kachasị mma n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, n'ụwa niile.
Ọdịiche dị iche iche
methinks na-enyere ụlọ ọrụ ọ bụla aka ịchọta, chọta ma gbaa ndị ahịa ajụjụ ọnụ na atụmanya site na ịkpọ oku vidiyo ihu na ihu. Nnyocha a na-enyere aka na-azụ ahịa na-enyere ndị ahịa aka ịmụta site na ndị ahịa ha site na ịrụ ọrụ nke ọma, na-akwụ ụgwọ, na-eche ihu na ihu ihu na-edozi, na-edekọ ya, na-edegharị ya, na-edezi ya ma na-edezi ya ngwa ngwa ma na-akọrọ maka ngwa ngwa, mmụta nhazi. Ihe ngosiputa nke RaaS na enye ndi oru nyocha ohere ka ha dua ajuju di ndu, nyocha nke oma na ihe omumu nke oge, na enyere ihe omuma site na isi ihe eji eme ihe na nghota nke ihe eji eme ihe nke aka ya site na ogologo oge nyocha.
methinks chọtara ihe ịga nke ọma n'oge na-arụ ọrụ conglomerates azụmahịa ụwa, na-eweta ndị ahịa US na ndị dike ụwa na ngwa eletrọniki, ụgbọ ala, egwuregwu, ngwanrọ na mgbasa ozi. N’oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ndị na-elekwasị anya na US, ọkachasị ndị nọ na mmalite nke R&D, etinyela ọrụ na methinks. methinks chọrọ ịgbanwe ụzọ nyocha ahịa na-eduzi site na ike ndị ọchụnta ego, ndị ọkachamara ọkachamara, ndị njikwa ngwaahịa, ndị na-emepụta ihe ma ọ bụ onye ndu R&D ọ bụla iji mee ngwa ngwa na ịba uru iji tinye ihe ọmụma banyere ahịa ha. Ọ bụla methinks ọrụ nwere ike ịtọọ oge na ndekọ Ajụjụ ọnụ ozugbo, na-ndetu, ibe edokọbara nghọta, na ndị ọzọ. Vidio niile bụ akara-oge ma chekwaa ya na igwe ojii maka nnweta dị mfe, idezi na ịkekọrịta.
Nnukwu ihe dị iche iche methinks na-enye bụ ọdọ mmiri nke ndị otu na-elekwasị anya na-elekwasị anya. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 400,000 pre-screened Ndị na-eche echiche bụ isi na United States, a na-enweta nghọta ndị ahịa na-achọ, dị njikere inye echiche na mmeghachi omume bara uru. methinks na-enye nzacha iji nyere ndị na-eme nchọpụta aka ịmata ndị ha lekwasịrị anya igwe mmadụ, na-akpalite mmeghachi omume ozugbo site na ọdọ mmiri nke ndị ga-eme nke ọma na-ekere òkè nnweta maka ajụjụ ọnụ.
Site ohuru-mmalite-acha ọkụ ka narị afọ ụlọ ọrụ, ịghọta ihe ndị ahịa chọrọ na mkpa bụ ihe kasị mkpa ịga nke ọma. usoro ihe eji agbanwe usoro iheomume na ọnụego nyocha. Ebumnuche anyị bụ ijikọ gị na ndị ahịa ịchọrọ ka ị nwee ike ịjụ ajụjụ dị mkpa wee mụta. Anyị emeela ihe ngwọta dị mfe, ma mara mma maka nsogbu siri ike nke ịmepụta ikpo okwu siri ike, ngwa dị mfe iji na ebe ahịa dị egwu nke Echiche.
Philip Yun, methinks ngalaba-nchoputa na Chief Product Officer
methinks nnweta na ịnye ọnụahịa
methinks dị ugbu a wee bido na $ 89 kwa ajụjụ ọnụ. methinks na-enye usoro ịkwụ ụgwọ-ka-ị na-aga, yabụ ndị nyocha nwere ikike ịmalite ma ọ bụ gbasawanye ka mkpa nyocha ha nwere ike ịgbanwe. Ndị na-eme nchọpụta nwere ike inye ndị na-eche echiche nke ha ma belata n'ihu ọnụ ahịa metụtara ha site na ịkwụ ụgwọ ụgwọ ikpo okwu dị ala. Ndị ahịa na nnukwu ụlọ ọrụ - ma ọ bụ ndị ahịa chọrọ nyocha dabere na ọrụ - nwere ike ịbanye n'ime ụlọ ọrụ methink nke ikike nyocha gụnyere imeru ihe n'ókè, nyocha na mmepe ngosi. Maka ozi ndị ọzọ gaa na: methinks.io
Akwụkwọ ọcha: Ọ bụghị Nchọpụta Niile ka Okike
Ndị otu na methinks chọrọ ịkọwa isiokwu nke nghọta ndị ahịa na oge dijitalụ, yabụ anyị kere akwụkwọ ọcha Ọ Bụghị Nchọpụta Niile Ka Okike.
Budata Ndi Emeghi Ihe Nchoputa
Biko, budata, gụọ, ma mee ka m mara ihe ị chere. Ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịhụ RaaS na arụ ọrụ, anyị nwere obi ụtọ nye gị ngosi or malite a free ikpe.
Tags: nghọta dijitalụngwa ngwaMarc Andreesseneji ngwaahịaqualitative nnyocha ngwọtanyocha qualitative& rnyocha & mmependị na-eche echiche
Aaron Burcell, onye isi oche nke methinks Teknụzụ, nwere ihe karịrị afọ iri abụọ 'ahụmahụ na-eto eto vidiyo na-eto eto, ma bụrụ onye ndụmọdụ mbụ na ndị ahịa mbụ nke methinks. Obu ụzọ mee ọrịre ọrịre, arụ ọrụ yana ọnọdụ onye isi na Grockit (nke Kaplan nwetara), onye isi vidiyo vidiyo Vevo na Marcus nke Goldman Sachs. N'oge na-adịbeghị anya, Burcell rụrụ ọrụ dị ka COO na CMO nke Loop Media, bụ nke mbido afọ a jikọtara ya na FogChain, ụlọ ọrụ ngwanrọ na-ere ahịa n'ihu ọha na Silicon Valley.